'Gabataa La Shaggar': Irbaanni miiliyoona shanii akkam ture? - BBC News Afaan Oromoo
'Gabataa La Shaggar': Irbaanni miiliyoona shanii akkam ture?
Yunvarsiitii Finfinneetti Barsiisaa Hog-barruu kan ta'an Obbo Yohaannis Mokonnon galma Gibiraa Masaraa Minilik warra daawwachiisaa turan keessaati. Irbaata Shaggar miidhagsuuf galii sassaabuuf qophaa'errattis affeeramanii Ministeera Muummee waliin nyaataniiru.
Keessummoota affeeraman daawwachiisaa akka turan himanii, qofaa isaanii al takkaatti lammileen Chaayinaa 30 daawwachiisaniiru.
Keessummoota keessaas bara mootummaa Mangistuu Haylemaariyam warri masaraa kana arganii turan waan turaniif waan yaadatan kaasanii ajaa'ibsiifataa turan.
Bakka Atse Hayilesillaaseen itti awwaalaman, bakka namoonni jaatamman itti ajjeefamaniifi janaraalonni itti hidhaman hunda daawwachiisuu isaaniis dubbataniiru. Bakki awwaala Atse Hayilesillaasee gara jalaan yeroo ta'u waajirri Mangistuu ammoo irra isaa keessadha.
Masaraan kun lafa hektaara 40 ta'urratti akka hundeeffame kan dubbatan ogeessu kun kan hunda keessaas kaleessa daawwannaaf kan banaa ta'e tilmaamaan harka afur keessaa tokko kan ta'udha jedhan.
Obbo Yitibaarek Zagayyee abbaa qabeenyaa kampaanii Waarkaa Tireedingiidha. Warra kaleessa 'Gabataa La Shaggar' irratti hirmaatan keessaa tokkodha.
Pirojekticha deggeruun qaba jedhanii waan amananiif Birrii Miliyoona shan kaffalanii irbaata Gabtaa La Shaggar kanarratti hirmaataniiru.
"Waan guddaan irbaata sana osoo hin taane kaayyoo isaati, irbaanni tures baayyee gaariidha. 'Gabataa La Shaggar hangan yaadeen olittin arge," jechuun ibsan.
Yeroodhuma masaraa seenan daawwannaa akka taasisan himanii kun ammoo seenaa akka baran waan isaan dandeessiseef itti gammaduu dubbatu.
Masaraa gara fuula duraa fiilmiin irratti hojjetama jedhameefi Fulbaana dhufurraa eegalee daawwannaaf banaa ta'a jedhame daawwataniiru.
Masaraa mootummaa kana daawwachuun kan jalqabaa isaanii akka ta'e dubbatu. Atse Minilik irraa kaasee, Atse Haylesillaasee, ministeerota muummeefi pirezedaantonni bakka jiraatan arguu isaaniitti hedduu gammaduus dabalanii ibsaniiru.
Masaraan mootummaa kun keessattuu bara Dargii keessa seenaan hedduun waan keessatti hojjetameef daawwachuu danda'uu isaaniitti hedduu gammaduu kaasuun seenaafi godambaa dhalootatti darbuu qabudhas jedhan.
Namoota irbaata kana irratti argaman 300 ta'an keessaa walakkaan lammilee Itoophiyaa yommuu ta'an walakkaan isaanii ammoo lammilee biyyaa alaa akka ta'an Obbo Yohaannis himaniiru.
Obbo Yohaannis keessummoonni affeeraman hunduu waltakkaa waan hidhufneef warri dursanii dhufan masaraa sana erga daawwatanii deebiyanii booda affeerraan 'kookteelii' isaaniif taasifameera jedhan.
Keessummoonni affeeraman kunneen dhuunfaanis, gareedhaanis karra masaraa sanarratti Ministeera Muummee waliin suura ka'aa turan.
Obbo Yitbaarak Zagayyees, "Ministeera Muummee waliin suura ka'uufi harka walfuudhuu qofaa osoo hin taane akka fira dhiyoottis waldhunganneera," jedhan.
Qophiiifi keessummeessuun tures sirriitti akka milkaa'ee dubbatu.
Faaggaan yeroo afuufamuufi dibbeen yeroo rukutamu
Yeroo keessummoonni hunduu dhufan akka aadaafi duudhaa durii sanatti dibbeen rukkutamee, warri karaa bitaafi mirgaa uffata aadaa uffatanii dhaabbatan ammoo faaggaa afuufaa keessummoonni gara galma itti nyaataniitti seenan.
Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad ammoo hanga keessummoonni hunduu seenanitti karrarra dhaabbatanii harka fuudhuun simachaa turan jedhan Obbo Yohaannis.
Obbo Yitbaarak kanaan dura ministeerota muummee biroo waliin walarguudhaan harka kan fuudhan yommuu ta'u kan Dr. Abiy Ahimad waliin taaisan garuu addadha jedhaniiru.
Kanaaf sababii yeroo kennanittis, "Isaan namatti dhiyeenya kan qabaniifi osoo hin nuffiin nama aasofsiisuuf dandeettii isaa ni qabu," jedhan.
Yeroo galma keessatti argamanis, "'Kitaaba Fiqir Iske Maqaabir' kan jedhu waanan dubbiseef kutaa Fitawuraarii Mashashaan Gibira itti nyaachisuti natti yaadatame," jedhan.
Ministeerri Muummee erga keessummoonni hunduu galanii booda gara galmaa seenanii ibsa waa'ee pirojektii isaanii ilaallatu ibsaniiru.
Bakka tokkoo tokkoo keessummootaa taa'an dhufanii harka fuudhuudhaan dhaabbata kamirraa akka dhufan gaafachuudhaan 'Pirojektii Shaggariin miidhagsuutti hirmaachuu keessaniif galatoomaa' jedhaniiru.
'Orkestiraan Aadaa Baalagaruu' Abraam Waldee qophii ajaa'iba ta'e dhiyeesseera kan jedhan Obbo Yohaannis Ministeerri Muummee Abrahaamiin galateeffataniiru.
Dr. Abiy kaleessa affeerraa irbaataaarratti keessummootaafi waa'ee misooma laggeen Finfinneefi pirojektoota biroo magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiranii ibsaniiru.
Ministeera Muummee qofa osoo hin taane Diyaaqon Daani'eel Kibirat mana kitaabaa namoota 20,000 keessumsiisa jedhame naannoo masaraa mootummaatti ijaaramuuf yaadame viidiyoon maal akka fakkaatu agarsiisaniiru.
Manni kitaabichaa bakka bal'aa naannoo paarlaamaa fuulduratti argamutti ijaarama.
Dizaayiniin Masaraa Mootummaa gara gadii jirus akka xumurameeru Ministeerri Muummee akka ibsan kan himan Obbo Yohaannis, mootummaa Firaansii waliin hojjetamaa jiras jedhaniiru.
Pirojektiin Lagahaar Dolaarri Biliyoona lama baasii irratti ta'us yeroo dhiyootti akka jalqabamu himaniiru.
"Walumaa galatti haasaa ministeera muummee keessatti pirojektoonni ja'a maqaa dha'amaniiru," jedhan.
Haasaa isaan taasisan keessaa waan ijoon fudhadhe tokko jedhan Obbo Yohaannis, 'Dhukkee kaasuurra ashaaraa kaa'uu wayya' kan jedhanidha. Sababoota gara garaatiin walitti bu'insa uumuun dhukkee kaasuun salphaadha. Ashaaraa dhalootaaf darbu kaa'uun garuu baayyee hojii barbaachisaadha ergaa jedhu dabarsuu isaanii dubbatan.
Keessummoota affeeraman hundas sagalee tokkoon akka dirqama biyyaa bahanis waadaa seensisanii turan.
Kanaan booda ture yeroon irbaataa kan itti fufe.
Foon dheedhiin/diiminni warra barbaadaniif naanneffamaa ture, daadhiinis birilleedhaan dhiyaataa ture. Namoota biyya alaatiifis nyaanni kan warra faranjootaa dhiyaateeraaf.
Lammileen biyya alaa keessaa Chaayinoon akka heddummaatanis Obbo Yohaannis himaniiru.
Obbo Yitbaarak jijjiirama masaraa mootummaa keessatti argan kaasuun pirojektichi yeroo dhiyoo keessatti xumuramee hojiira akka oolus abdii qaban dubbataniiru.
Yeroo xumuramus bakka turistootaan daawwatamu ta'ee lammiileen biyyattii harka qalleeyyii ta'aniif bu'aa akka buusullee abdii akka qaban kaasaniiru.
"Keessattuu bakkeewwan bashannanaa biyya keessa jiran hedduun isaanii hoteelootadha; hoteela keessatti ammoo dhugaatiifi nyaata qofaadha," kan jedhan Obbo Yitbaarak, kun bakkawwan bashannaan akkanaa kanarraa adda waan ta'aniif namoota biyya keessaafi biyya alaatiif bu'a qabeessadha jedhu.
Akka Obbo Yohaannis jedhanitti bakkeewwan bashannaan laggeen irratti miidhagfaman kun haala teessuma Finfinnee keessatti hojjetamuun akka jalqabbii gaariitti fudhatamuun jajjabeeffamuu qabu.